Gudoomiyaha Deegaan ku yaala G/mudug oo ay Xireen New Police-ka DDS-da Itobiya – SBC
Gudoomiyaha Deegaan ku yaala G/mudug oo ay Xireen New Police-ka DDS-da Itobiya
Posted by Webmaster on May 14, 2013 Comments
Deegaan lagu magacaabo Darusalaam oo ka tirsan Deegaanada ku yaala xadka dalkaasi Itoobiya uu la wadaago gobolka Mudug Itoobiya ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay yimaadeen ciidamo ka tirsan Islaamulka Soomaaliya kana kaxeysteen dad rayid ah iyo masuulkii ugu sareeyay deegaankaas.
Gudoomiyihii Deegaanka Daarasalaam iyo xubno kale oo ay ka mid yihiin dad rayid ah ayay ciidamadan itoobiyaanka ahi ku xireen xadka ay kala wadaagaan buuhoodle Dowlada Itoobiya, sidaasina waxaa SBC u xaqiijiyay gudoomiye ku xigeenka deegaankaas.
“Gudoomiyaha Deegaankan Daarusalaam, Taliyihii ciidanka iyo rayid kale ayaa u tagay buuhoodle dhanka ay ka degen yihiin Ciidamada New Poliska la yirahdo si ay waan waan uga galaan gaari ay qabsadeen ciidankaas, balse taliyihii ciidankaas ayaa xiray” sidaasi waxaa yiri gudoomiye ku xigeenka deegaanka Daarusalaam ee gobolka Ceyn.
Waxa uu gudoomiye ku xigeenku hadalkiisa intaas ku daray in aysan garan karin sababta rasmiga ah ee ay ciidamada New Police-ku u xireen gudoomiyaha deegaanka iyo dadkii la socday, waxaanu sheegay in aanu jirin tuhun kale oo ay qabaan dhankooda.
Waxa uu Baaq u jeediyay gudoomiyaha gobolka Cayn iyo Madaxda sare ee Dowlada Puntland isagoo ugu baaqay in ay howshan faraha la soo galaan, kalana hadlaan dowlada ismaamulka Soomaalida xarigan loo geystay gudoomiyihii deegaanka daarusalaam.
Mudooyinkii ugu dambeeyay ciidamada Loogu yeero New Police-ka ee ka howlgala ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxa ay ka wadeen deegaanka dhaq dhaqaaqyo ay ku dabagalayaan kooxo uu maamulka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ugaarsado kuwaas oo mucaaradku ah maamulkaasi.